Hubka Ay Isticmaalaan Dadka Rayidka ah oo Dawladda New Zealand ay Joojin Doonto.
Dowladda dalka New Zealand ayaa sheegtay in ay joojin doonto isticmaalka nuucyada hubka ee dadka rayidka ah, ka dib markii dalkaasi ay soo mareen xaaladdii ugu xumeyd ee lagu laayo 50-ruux oo ku jiray Masjid. Ra’iisal wasaaraha dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo acinda Ardern ayaa sheegtay in la mamnuuci doono dhammaan...
Mudaharaadyo ka dhan ah m/weyne TRUMP oo ka dhacey gudaha iyo debedda dalka Mareykanka.
Bannaan baxyo badan ayaa ka dhacay walina ka socda qeybo ka tirsan dalka Mareykanka kuwaasoo looga soo horjeedo siyaasadaha qallafsan ee madaxweynaha shalay Mareykanka loo dhaarshay Mr. Donald Trump. Kumanaan kun ayaa isugu soo baxay caasimado kala duwan oo ku yaal Mareykanka. Sidoo kale waxaa mudaaharaadyo kuwaa la mid ah...
KHasaaraha Hantiyadeed ee uu geystey Dabkii ka qarxey Suuqa Bakaaraha oo la shaaciyey.
Cabdinaasir Cali Maxamed, oo ah Guddoomiyaha Ganacsatada Gobolka Banaadir, oo la hadlay warbaahinta gudaha magaaladda Muqdisho, ayaa sheegay hantidii ku gubatay suuqa Bakaaraha todobaadkan, qiimo ahaan in ay gaareyso $4-Million. Waxaa suuqa Bakaaraha gaaray intuu dabka socday gudoomiyaha maamulka gobolka Bandir, Sheekh Yusuf Xuseen Jimcaale, waxaa uuna sheegay in sababta...
Maddasha wada tashiga qaran ragga la baxey oo maalintii afraad shirkoodu socdo iyo qodobo leysku hayo.
Waxaa weli ka socda Muqdisho Shirka Madasha Wada-tashiga oo saddexdii bishaan ka furmay madaxtooyada Somalia, kaasoo la filayay in xalay lasoo gaba-gabeeyo. Hoggaamiyaasha Madasha Qaranka ee Muqdisho ku Shirsan, ayaa weli ka doodaya Waqtiga Rasmiga ah ee ee la qabanayo doorashada Soomaaliya ee Sannadkan 2016-ka dhacaysa. Dhanka kale, Warar kala duwan...